Ny filokana vaovao nataon'i Robio dia antsoina hoe Nibblers | Androidsis
Nibblers no filokana vaovao an'i Rovio amin'ny fomban'ny Candy Crush
Rovio no nitondra antsika tamin'ity fahavaratra ity Ady vorona tezitra, karazana lalao video Zoo Keeper DX-style puzzle izay tsy maintsy itandremantsika ny saina ilaina mba hampifangaroana tarehimarika samihafa handalovana ambaratonga samihafa ary hametraka antsika eo alohan'ny fikorontanana rehetra hananana fameram-potoana tokony hamaranantsika azy. Lalao video mahafinaritra sy tsotra izay manohy ny fikarohana mba hahitana mekanika hafa hahatratrarana fahombiazana ivelan'io Angry Birds mahafinaritra io.
Izao dia mitondra anaram-boninahitra vaovao indray izy ho antsika, taorian'ny nanombohany ny Angry Birds 2, izay ahafahantsika milaza tsara fa izany no izy tena amin'ny fomban'ny Candy Crush malaza. Miaraka amin'i Nibblers dia tonga ny filohany vaovao hitondra antsika lalao voankazo izay tsy maintsy hahazoan'ireo andiana nibbler vokatra rehetra azo atao mba hanomezana fahafaham-po ny hanoanana. Miaraka amin'ny filalaovana mitovy amin'ny lalao KING voalaza etsy ambony, i Rovio dia mitondra lalao video tsara hankafizinao amin'ny Android.
1 Manaraka an'i KING
2 Manambatra ny voankazo amin'ny loko rehetra
Manaraka an'i KING
Tsy ho voalohany na ho farany ny hitondra horonan-tsarimihetsika Candy Crush ka raha tianao be ity lalao ity dia azo antoka fa tsy maintsy mandehana amin'ny fametrahana an'ny Nibblers hahitana raha mihantona be ianao hanana izany amin'ny findainao na tablette mandritra ny fotoana maharitra.
Toy ity karazana lalao video ity, ny loko, ny voankazo ary ny vokany dia ao anatin'ny maherifo hanomezana antsika traikefa amin'ny lalao iray manontolo izay ahafahantsika mandihy amin'ny rantsan-tànana handefa ireo fitambarana havia sy havanana. Ary tsy hanambara mekanika lalao lehibe koa isika, satria eto ny zavatra tsotra dia ny mandresy ary ny mahatonga ny lalao video an'ity fomba ity handresy. Ianareo izay nilalao Candy Crush dia tsy hahagaga anao, raha tsy noho ny asa lehibe ananan'ity orinasa ity izay manana fitaovana finday ho toy ny sehatra ahafahanao mandefa ny fahaizanao sy ny fahalalanao rehetra amin'ny fialam-boly.
Manambatra ny voankazo amin'ny loko rehetra
Mora be amintsika izany raha mila afangaro amin'ny voankazo efatra, dimy na mihoatra ka miseho Coral, Octopus ary ny sisa amin'ny Nibblers. Amin'izany dia hanana andiana hery hihinanan-kanina haingana kokoa isika, arotsaho ireo androngo manafintohina izay manahirana antsika ary mandresy ny sakana sasany izay ho hitantsika amin'ny dingana tsirairay.
Tonga izao ny tsara indrindra ambaratonga mihoatra ny 200 hametraka fitsapana izany ary hahafahantsika milalao an'ity lalao mahafinaritra ity tsy misy fitsaharana ho filokana Rovio vaovao amin'ny faran'ity vanim-potoana fahavaratra ity. Azonao atao ny mifandray amin'ireo namanao Facebook amin'ny takelaka mpitarika sy zavatra hafa mifandraika amin'ity karazana lafiny ara-tsosialy ity izay mitaky fahafinaretana bebe kokoa ihany koa mba hahazoana tombony betsaka amin'ny Nibblers.
Azonao ilay izy maimaim-poana avy amin'ny Play Store miaraka amin'ireo micropayments malaza handrosoana amin'ny lalao, saingy tsy manakana anao tsy hankafy ity ankamantatra ity hanambatra ny karazana voankazo rehetra ao amin'ny Rovio vaovao aorian'ny ireo vorona tezitra 2 tonga vao haingana.
Kalitao teknika tsara
Tena mitovy amin'ny Candy Crush
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Candy manorotoro » Nibblers no filokana vaovao an'i Rovio amin'ny fomban'ny Candy Crush
Nexus Player vaovao mamaky ny FCC